Menduru Fekitori - China Menduru Vagadziri uye Vatengesi
Crown Awards ndiyo huru muAmerica yekuzivisa mukombe. Kunyangwe iwe uchida mukombe weKuzivisa, menduru Yekuziva, dombo rekuzivisa kana zvimwe, edu Ekuzivisa mibairo anouya nekukurumidza kutendeuka uye 100% kugutsikana kwevatengi.
Kukunda chiito kunze kwesandlot kwakakodzera mubairo wepamusoro. Yedu sarudzo yemaball baseball ndiyo nzira huru yekupemberera avo vanomhanya pamba! Kune akawanda masitaera uye saizi, chimwe chinhu chinokwana chero kuravira uye bhajeti. Menduru yega yega iri nyore kugadzirisa pamwe nesarudzo hombe yemabhandi akasungirwa kusarudza kubva uye, nekungowedzera zvishoma, zvakavezwa pamunhu kumashure! Senguva dzose, menduru dzedu dzinouya nekutumirwa nekukurumidza uye 100% kugutsikana kwevatengi.
Pemberera kukunda padare rebasketball nemenduru kubva kuKingtai! Isu tinopa akasiyana menduru mumhando dzakasiyana, saizi uye mavara, ese anogadziriswa. Menduru yega yega inouya nesarudzo hombe yema ribboni akasungirirwa uye, kwekuwedzera zvishoma, zvakavezwa pamunhu kumashure. Nemenduru yemhando yepamusoro pamitengo mikuru yakadai, inovimbiswa kutumira nekukurumidza uye 100% kugutsikana kwevatengi, iri slam dunk!
Yakagadzirwa muUSA, edu mazana mashanu maMedallion akasarudzika muhunhu. Imwe neimwe inogadzirwa kubva kune yakasimba ndarira (antique goridhe kupera), solid nickel (antique sirivha kupera) kana solid solid mhangura (antique bronze kupera). Kuyera 2 ″ dhayamita uye .102 (10 guage) gobvu, menduru idzi inyanzvi yekutarisisa medallion ine inorema uye "yakakura" kunzwa kwavari. Mafurati ekumashure emamenduru aya akakwana kune yakasarudzika micro-yakatetepa laser rakatemwa tag inowanikwa mu ...
Bronze bhasikoro menduru nyeredzi uye pateni yakakomberedza, izere ne1 "gomo bhasikoro repakati disc. Inoyera 50mm muhupamhi uye inouya ne loop yekunamatira menduru maribhoni. Inokodzera munhu zvichienderana nekunyora pane reverse yemenduru ..
Kutsvaga chimwe chakasiyana? "Zvitorere kuImba" neMenduru yedu yeImba Mubairo inoratidzika seimwe yemari yedu hombe (3-3 / 4 or) kana makuru (4-3 / 4 ″) menduru! Yakagadzirwa ne100% laser yakatemwa acrylic, uye 1/4 ″ gobvu, idzi mhuka dzakakura uye dzine mavara. Iwo akasimba mavara mavara uye magirafu akananga pamusoro akadhindwa neakaporeswa UV inks inosimudzira yakanaka inopera isingagadzirike mufananidzo ine yakasimba color (ichi HASI chinodhura chinamirwa !!) Medals anouya aine YEMAHARA Ultra premium 1-1 / 2 ″ ...
DCM Decagon menduru inounza yechinyakare decagon chimiro nemifananidzo yazvino. Yakagadzirwa kubva kukanda simbi alloys ine nhema nhema, ese maDCM menduru anoyera 2 "muhupamhi, uye ane akajeka ruvara anozadza achiburitsa inopenya yakajeka.
Izvi zvikamu zviri pamusoro zvinoratidza yedu indasitiri-inotungamira kusarudzwa kwemenduru nemitambo uye zororo dhizaini. Ehe, isu tine mitambo inozivikanwa se baseball, basketball, nhabvu uye nhabvu, asi isu zvakare tine menduru dzekuchovha bhasikoro, kubata, kubika uye zvimwe zviitiko. Isu tinotova nemamenduru akajairwa, senge edu akakurumbira maOlimpiki-dhizaini torch menduru, ayo anogona kushandiswa kune chero chiitiko.